I-Matte Lipstick ecebile e-Pigmented Mineral Lipstick 100% Ukwakheka Kwemvelo Okungeyona Into Enobuthi, Isihluku kanye ne-Paraben Free Long Lstst lipstick.
Imahle futhi ihlala isikhathi eside, i-matte lipstick iyashelela, i-creamy, ayizweli, ayomisi futhi inemibala emihle.
Eyokuqala:Isethi yethu yama-matte lipstick inemibala yesitayela ethandwa kakhulu. I-matte ekhangayo, ehlala isikhathi eside futhi engenamanzi, kulula ukususa ngamafutha okuhlanza izindebe. ukuthungwa okuthambile ngombala okhanyayo ukugcina izindebe zakho zibushelelezi futhi zithambile.
Ababili bokuqala:Kwenziwe ngezithako zemvelo, zazo zonke izinhlobo zesikhumba, kufaka phakathi isikhumba esibucayi. Ngama-lipstick asezingeni eliphakeme, anemibala kakhulu futhi ahlala isikhathi eside.
I-Lipstick ebushelelezi futhi ethambile, le lipstick ebushelelezi ebushelelezi inombala opholile nowe-pigment matte, futhi umphumela obushelelezi we-matte ungaslayida ngokushesha bese uyigcina isendaweni yayo.
I-Confidante nephupho, le lipstick ye-matte ayikaze yomile, ihlale ikhilimu, iyaphupha futhi i-matte! Manje kukhona uchungechunge lwemibala emisha ye-matte ongakhetha kuyo. Le mibala ye-smart matte lipstick iyilokho izindebe zakho ezikudingayo.
Izintathu zokuqala:Kuyisilika, kuyinhle futhi kuyinhle, zakha izindebe zakho kancane, zilungele ukwakheka kwazo zonke izinkathi zonyaka, ikakhulukazi ehhovisi, ukuphola, ukuyothenga, ukuzijabulisa nabangane. kanye neminye imikhosi.
Siyaqonda ukuthi umatasa, yingakho sidale le lipstick ephathekayo. Ifika ifomu elihlanganisiwe ongalisusa kalula esikhwameni sakho noma esikhwameni sokwenza izimonyo.
Izine zokuqala:Izindebe ezinemibala, ezimibalabala kunemibala yethu kanokusho nemiphumela yokuthambisa. IJOYO lipstick icebile ngezithako ezondlayo futhi ingathambisa izindebe zakho.
Umbala Wezindebe Okhazimulayo, sebenzisa i-JOYO lipstick ukugcina izindebe zithambile, zibushelelezi futhi zimanzi. Khetha kusuka ezinhlobonhlobo zama-hues adonsa iso ngombala okakhilimu ohlala isikhathi eside nesithambisi esinamandla.
I-JOYO Lipstick, noma ngabe ufuna i-lipstick ebomvu ebomvu noma umbala onqunu ophelele, ungakhetha umbala ngezikhathi ezahlukahlukene. Khetha i-lip lipstick, dala ithoni yombala ophakeme, noma khetha i-lipstick yombala kakhilimu ukuze udale izindebe ezibushelelezi, ezithambile futhi ezimanzi.
Ukufaka isicelo se-Lipstick, izinsuku zokuzalwa, imishado, amaphathi, izimonyo ze-Halloween, amaphathi e-cocktail, isizini yesikole, izipho zosuku luka-Valentine, izipho zikaKhisimusi, njll
Langaphambilini Ukwenza ubuso-BD-CH
I-Aloe Vera Lipstick
Ucingo: + 86-755-21047959
Ikheli: Igumbi 501, No. 279-6, iDabutou Village, umphakathi waseSongyuansha, uGuanhu Street, esifundeni iLonghua
JOYO © Wonke Amalungelo Agodliwe. Imikhiqizo Okufakiwe, Ibalazwe, Amabhulashi we-Makeup ahamba phambili, I-Matte Eyeshadow Palette, Igolide Lamehlo, I-Lipstick ekhanyayo, I-Mini Lipstick, Khipha ku-internet Cream Eyeshadow, Yonke Imikhiqizo